Rwendo rweCayman Islands | Kufamba Nhau
Rwendo rweCayman Islands
Mariela Carril | | Nzvimbo dzekushanya, Islands
Nyika ine zviwi zvakanaka zvakawanda uye iyo Gungwa reCaribbean inotarisisa huwandu hwakanaka hweparadhiso. Semuyenzaniso, Cayman Islands, nharaunda yeBritish iri pakati peJamaica neYucatan Peninsula, inozivikanwa nekuve a mvumo yemitero uko makambani uye mamirionea vanonzvenga mitero.
Asi iyo Cayman Islands ine yavo pfuma yevashanyi, saka nhasi tichave kuziva izvo zvavari, avo nharaunda, kwavo tsika ...
2 Cayman Islands Tourism
Zvitsuwa pane matatu pamwe chete uye vari kumadokero kweGungwa reCaribbean, kumaodzanyemba kweCuba nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweHonduras. Ndezve iyo Grand Cayman Island, Cayman Brac uye Little Cayman. Guta guru iguta reGeorge Town, paGrand Cayman.
Zvitsuwa zvinofungidzirwa kuti zvakawanikwa naChristopher Columbus muna 1503 parwendo rwake rwekupedzisira. Columbus akavabhabhatidza ivo Las Tortugas, kune huwandu hwakawanda hwemhuka idzi, kunyangwe paivewo nemakwara uye zvinonzi, kubva pano, zita ravanaro nhasi Vanochera matongo havana kuwana zvisaririra zvaigarwa vanhu vasati vagara muEurope, asi hazvigone kutongwa.
Ipapo zviwi zvaive Nzvimbo dzevapambi, vatengesi nevanozvisiya kubva kuuto raCromwel, iyo panguva iyoyo yaitonga England. England yakasara nezvitsuwa, pamwe neJamaica, mushure mekusaina Chibvumirano cheMadrid muna 1670. Kunyangwe panguva iyoyo yaive paradhiso yemakororo. Gare gare, kutengeswa kwevaranda kwakachinja mugumo wezvitsuwa pakaunzwa zviuru kubva kuAfrica.
Kwenguva yakareba iyo Cayman Islands yaive pasi pekudzidziswa kweJamaica, kusvika 1962 apo Jamaica yakawana kuzvitonga. Makore akati wandei yendege isati yavakwa pazvitsuwa, saka izvo zvaikwezva kushanya. Zvino kwakauya mabhangi, mahotera uye chiteshi chengarava. Nhoroondo Cayman Islands yanga iri nzvimbo yemahara yekuenda. Pane nyaya isiri yechokwadi inotaura nezvekuparara kwechikepe kwakanunurwa nevagari vepachitsuwa ichi. Nhoroondo inoti mukununura ivo vakaponesa nhengo yekorona yeChirungu uye ndosaka mambo akavimbisa kusambobhadhara ...
Zvitsuwa zviri pamusoro pegomo riri pasi pemvura, iyo Cayman Range kana Cayman Rise. Iwo anenge makiromita mazana manomwe kubva kuMiami uye makumi matatu nematanhatu chete kubva kuCuba. Grand Cayman Island ndiyo hombe kune vatatu. Zvitsuwa izvi zvitatu zvakaumbwa nemakorari akafukidza makomo emakomo kubva kuIce Age, zvisaririra zveSierra Maestra muCuba. Mamiriro ekunze ayo akanyorova uye akaoma.
Kune mwaka wakanyorova kubva Chivabvu kusvika Gumiguru uye mwaka usina mvura kubva muna Mbudzi kusvika Kubvumbi. Iko hakuna hukuru shanduko mukushisa, asi madutu ane njodzi ndeaya anoyambuka Atlantic kubva munaJune kusvika munaNovember.
Ngatitangei nechitsuwa Sekuru Cayman. Akanaka Manomwe Mile Beachs iri muTop 3 yenzvimbo dzekushanyira nekuti inotarisisa akawanda mahotera uye nzvimbo dzekuchengetedza. Ichi ndicho chimwe coral beach kumahombekombe ekumadokero kwechitsuwa, akanaka. Iri ruzhinji rwegungwa rinogona kuongororwa netsoka uye kuti kunyangwe iri zita rayo rakareba makiromita gumi. Imwe nzvimbo yemahombekombe ndeye North Sound, imba yemastray.
George Town Iri iguta rinonakidza rine zvivakwa zvechinyakare, mashopu asingabhadharwe, zvisikwa zvakasarudzika zvevapfumi asiwo zvitoro zvemaoko uye zvigadzirwa zvemuno. Kuyambuka chitsuwa kuenda kumabvazuva unogona kushanyira iyo Mambokadzi Elizabeth II Botanical Park kana the Bhuruu Iguanas. Kuti uzive nhoroondo yemuno pane iyo National Museum yeCayman Islands, Rum Point nemikana yayo yekudonha nemiti yayo yecasuarina, iyo Pedro St Jame Castles, chivakwa chekare pane zvitsuwa, kana Bodden guta, guta rekutanga rechitsuwa.
Cayman Brac ndiyo yakanakira kuenda kana iwe uchida iyo nature uye kwete zvitoro zvisina basa. Chitsuwa chine mapako ematombo ekuziva, kune masinkholes ekuita snorkeling uye kudhizaivha, Kunyangwe nechikepe chakanyura, kune masango akasvibira echitsuwa ichi, imba yakanaka kune shiri dzinoshamisa, dzakazara nzira dzekunakidzwa nekukwira ... Pano unogona kusvika nendege, muhafu yeawa, kubva Grand Cayman.
Nokuda kwayo Little Cayman chitsuwa chiri kure, iyo ingori makiromita gumi nematanhatu uye kiromita nehafu yakafara. Iyi inzvimbo yakanyarara ine runyararo mahombekombe asina vanhus, miti yemichindwe inofamba nemhepo, yakachena mvura ... Unogona kukwereta bhasikoro kana sikuta kuti uiongorore, kushambira mumvura inodziya ye Maodzanyemba Hole Inzwi Lagoon, shanyira nzvimbo yakachengetwa Natural Booby Pond, nezviuru zveshiri, famba-famba pakati pemakungwa kana kushambira mu Rweropa Bay Wall Marine Park.
Pano pane imwe 1500 mita kudonha saka magineti evakasiyana, pamwe ne Hupenyu hwemumvura inoshamisa inovanda munzvimbo dzakadzika uko pasina kushaikwa kwemwaranzi, shark uye hova. Iwe unogona zvakare kushinga kukwasva zvishoma mu kayak uye usvike iyo Chitsuwa cheOwen, chimwe chinhu senge isingazivikanwe Cayman Island.
Tingaite sei kuronga kushanya kuCayman Islands? Zvakanaka, mazuva gumi anogona kutanga kwakanaka kana iwe uchida kushandisa nguva muGrand Cayman uye edza mazuva maviri kana matatu pane chimwe chitsuwa. Zvekuenda kwa Honey mwedziIye akanaka sezvo kune vakatasva bhiza pamhenderekedzo yegungwa, vega dinner uye spa zvikamu muhotera dzese. Kutaura nezve hotera, unogona kusarudza sarudzo zvese - zvinosanganisa uye vamwe vane zvekudya nekumwa mapurani aunobhadhara iwe wega.
Kushanyira maCayman Islands Izvo hazvidikanwe kugadzirisa vhiza. Kana iwe uri vagari veMexico, Brazil kana Argentina, kana. Y hapana majekiseni anodiwa, ikozvino. Tichaona gare gare zvinoitika neCovid. Ichokwadi kuti huwandu hwekushanya hunobva kuUnited States asi iwe unogona zvakare kusvika nendege kubva kuCuba uye kubva kuHonduras. Kamwe pazvitsuwa iwe unogona kushandisa zvifambiso zveruzhinji, mabhazi, matekisi, kubhadharisa mota ... Kusvetuka pakati pezvitsuwa hongu kana hongu iwe unofanirwa kufamba nendege, Cayman Airways Express.
Ehezve, ramba uchifunga kuti pano unotyaira kuruboshwe nzira, yakanaka Chirungu. Ndeipi mari yeCayman Islands? Iyo Caymanian dhora, kunyangwe madhora ekuUS achigamuchirwawo. Chiyero chekutsinhana ndeche 1 US dollar 0.80 CI $ cents. Zvakanaka, tinotarisira kuti ruzivo urwu runokubatsira iwe kufunga nezveCayman Islands senzvimbo inogona kuenda kuzororo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Nzvimbo dzekushanya » Rwendo rweCayman Islands